ကြက်သွန်နီ(၁)တန်ပေး ပို့ပြီး ရည်းစားဟောင်း ကို ငိုစေချင် ခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီး – Let Pan Daily
သင်အနေနဲ့ အသဲကွဲ တာကို ကြုံဖူးပါသလား? စာဖတ်သူများ အနေနဲ့ အသဲကွဲ တာကို အနည်းနဲ့ အများတော့ ကြုံဖူးကြမှာပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ အသဲခွဲခံရသူများအနေနဲ့ တစ်ဖက်လူကို ကိုယ်ခံစားရသလိုမျိုး ပြန်လည်ခံစားစေချင်တာတော့ မထူးဆန်းပေမယ့် အမျိုးသမီးတစ်ဦးကတော့ သူမကို လှည့်စားပြီး အသဲကွဲအောင် လုပ် ခဲ့တဲ့ ရည်းစားဟောင်းကို ကြက်သွန်နီများပေး ပို့ခဲ့ပြီး သူမငိုခဲ့ရသလို ပြန်လည်ငိုစေချင်ခဲ့ပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံ ဇီပိုမြို့က Zhao လို့ခေါ်တဲ့ အမျိုးသမီး တစ်ဦးဟာ ကြက်သွန်နီ တစ်တန်ကို မှာယူခဲ့ပြီး သူမရည်းစားဟောင်းရဲ့အိမ်တံခါးဝတွင် ပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။ Zhao ဟာ ကြက်သွန်နီပို့ပေးသူများကို သူမရဲ့ရည်းစားဟောင်းအနေနဲ့ အိမ်မှာမရှိခဲ့လျှင် ကြက်သွန်နီများကို သူမရည်းစားဟောင်းရဲ့အိမ်တံခါးဝတွင် ချထားခဲ့ပြီး စာတစ်စောင် နဲ့အတူချန်ထား ခဲ့ဖို့ မှာကြားခဲ့ပါတယ်။ စာထဲတွင် ” နင်ငါ့ကိုသုံးရက် ငိုအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် ခုတော့ နင်ငိုရမယ့် အလှည့်ရောက်ပါပြီ ” ဟု ရေးသားထားခဲ့ပါတယ်။
သူမရဲ့ရည်းစားဟောင်းကတော့ ” ကျွန်တော့်ရဲ့ရည်းစားဟောင်းက ဒရမ်မာ အရမ်း ဆန်တာ။ ကျွန်တော်သူနဲ့ လမ်းခွဲခဲ့တုန်းက ကျနော်မျက်ရည်တစ်စက်မှ မကျခဲ့တာကို လူတိုင်းကိုလိုက်ပြောပြနေတော့တာပဲ။ ကျွန်တော်မငိုခဲ့တဲ့အတွက် လူဆိုးတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီလား ” လို့ ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။သူမပေးပို့ခဲ့တဲ့ ကြက်သွန်နီများဟာ များလွန်းတဲ့ အတွက် ပစ္စည်းပို့သမားတစ်ယောက်က “ကျွန်တော်တို့ မတူညီတဲ့ကြက်သွန်နီအရောင်းဆိုင်များမှ ကြက်သွန်နီများကို တစ်တန်ပြည့်အောင်စုပြီး ‌သူမရည်းစားဟောင်းအိမ်အထိ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရာမှာ အချိန် ၅ နာရီခန့် ကြာမြှင့် သွားခဲ့ပါတယ်။ သူမ ရည်းစားဟောင်း တကယ်ပဲငိုပါ့မလား ဆိုတာကတော့ မသေချာပေမယ့် ကျွန်တော်တို့တော့ ငိုခဲ့ရပါပြီ ” လို့ သတင်းထောက်များကို ပြန်လည်ဖြေကြားသွားခဲ့ပါတယ်။
သူမရဲ့ရည်းစားဟောင်းက ထိုကြက်သွန်နီ များကို ဘယ်လို အသုံးချမလဲဆိုတာ စိတ်ဝင် စားစရာကောင်းနေ ခဲ့ပါတယ်။ လူမှုကွန်အသုံးပြုသူများကတော့ ” သူမရဲ့ရည်းစားဟောင်းကတော့ ကြက်သွန်နီ များကို ငိုယိုပြီးတော့ စရောင်းပါတော့မယ် ” တချို့ကလည်း ” ဒါက ပိုက်ဆံကို အလကားဖြုန်းတီးတာပဲ ကြက်သွန်နီ ကို ခွာမှ မျက်ရည်ကျမှာပေါ့ ” အခြားသူ တစ်ယောက်ကတော့ ” ဒီကောင်ကတော့ ပွတာပဲ ကြက်သွန်နီတွေကို လက်ကားရောင်းပြီး ဘဏ်ထဲပိုက်ဆံသွားထည့်ရုံပဲ ” လို့ အရွှန်းဖောက်ကာ ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
ကွကျသှနျနီ(၁)တနျပေး ပို့ပွီး ရညျးစားဟောငျး ကို ငိုစခေငျြ ခဲ့တဲ့ အမြိုးသမီး
သငျအနနေဲ့ အသဲကှဲ တာကို ကွုံဖူးပါသလား? စာဖတျသူမြား အနနေဲ့ အသဲကှဲ တာကို အနညျးနဲ့ အမြားတော့ ကွုံဖူးကွမှာပါ။ ပုံမှနျအားဖွငျ့တော့ အသဲခှဲခံရသူမြားအနနေဲ့ တဈဖကျလူကို ကိုယျခံစားရသလိုမြိုး ပွနျလညျခံစားစခေငျြတာတော့ မထူးဆနျးပမေယျ့ အမြိုးသမီးတဈဦးကတော့ သူမကို လှညျ့စားပွီး အသဲကှဲအောငျ လုပျ ခဲ့တဲ့ ရညျးစားဟောငျးကို ကွကျသှနျနီမြားပေး ပို့ခဲ့ပွီး သူမငိုခဲ့ရသလို ပွနျလညျငိုစခေငျြခဲ့ပါတယျ။
တရုတျနိုငျငံ ဇီပိုမွို့က Zhao လို့ချေါတဲ့ အမြိုးသမီး တဈဦးဟာ ကွကျသှနျနီ တဈတနျကို မှာယူခဲ့ပွီး သူမရညျးစားဟောငျးရဲ့အိမျတံခါးဝတှငျ ပို့ပေးခဲ့ပါတယျ။ Zhao ဟာ ကွကျသှနျနီပို့ပေးသူမြားကို သူမရဲ့ရညျးစားဟောငျးအနနေဲ့ အိမျမှာမရှိခဲ့လြှငျ ကွကျသှနျနီမြားကို သူမရညျးစားဟောငျးရဲ့အိမျတံခါးဝတှငျ ခထြားခဲ့ပွီး စာတဈစောငျ နဲ့အတူခနျြထား ခဲ့ဖို့ မှာကွားခဲ့ပါတယျ။ စာထဲတှငျ ” နငျငါ့ကိုသုံးရကျ ငိုအောငျလုပျခဲ့တဲ့အတှကျကွောငျ့ ခုတော့ နငျငိုရမယျ့ အလှညျ့ရောကျပါပွီ ” ဟု ရေးသားထားခဲ့ပါတယျ။
သူမရဲ့ရညျးစားဟောငျးကတော့ ” ကြှနျတေျာ့ရဲ့ရညျးစားဟောငျးက ဒရမျမာ အရမျး ဆနျတာ။ ကြှနျတျောသူနဲ့ လမျးခှဲခဲ့တုနျးက ကနြျောမကျြရညျတဈစကျမှ မကခြဲ့တာကို လူတိုငျးကိုလိုကျပွောပွနတေော့တာပဲ။ ကြှနျတျောမငိုခဲ့တဲ့အတှကျ လူဆိုးတဈယောကျဖွဈခဲ့ပွီလား ” လို့ ပွနျလညျဖွကွေားခဲ့ပါတယျ။သူမပေးပို့ခဲ့တဲ့ ကွကျသှနျနီမြားဟာ မြားလှနျးတဲ့ အတှကျ ပစ်စညျးပို့သမားတဈယောကျက “ကြှနျတျောတို့ မတူညီတဲ့ကွကျသှနျနီအရောငျးဆိုငျမြားမှ ကွကျသှနျနီမြားကို တဈတနျပွညျ့အောငျစုပွီး ‌သူမရညျးစားဟောငျးအိမျအထိ ပို့ဆောငျပေးခဲ့ရာမှာ အခြိနျ ၅ နာရီခနျ့ ကွာမွှငျ့ သှားခဲ့ပါတယျ။ သူမ ရညျးစားဟောငျး တကယျပဲငိုပါ့မလား ဆိုတာကတော့ မသခြောပမေယျ့ ကြှနျတျောတို့တော့ ငိုခဲ့ရပါပွီ ” လို့ သတငျးထောကျမြားကို ပွနျလညျဖွကွေားသှားခဲ့ပါတယျ။
သူမရဲ့ရညျးစားဟောငျးက ထိုကွကျသှနျနီ မြားကို ဘယျလို အသုံးခမြလဲဆိုတာ စိတျဝငျ စားစရာကောငျးနေ ခဲ့ပါတယျ။ လူမှုကှနျအသုံးပွုသူမြားကတော့ ” သူမရဲ့ရညျးစားဟောငျးကတော့ ကွကျသှနျနီ မြားကို ငိုယိုပွီးတော့ စရောငျးပါတော့မယျ ” တခြို့ကလညျး ” ဒါက ပိုကျဆံကို အလကားဖွုနျးတီးတာပဲ ကွကျသှနျနီ ကို ခှာမှ မကျြရညျကမြှာပေါ့ ” အခွားသူ တဈယောကျကတော့ ” ဒီကောငျကတော့ ပှတာပဲ ကွကျသှနျနီတှကေို လကျကားရောငျးပွီး ဘဏျထဲပိုကျဆံသှားထညျ့ရုံပဲ ” လို့ အရှနျးဖောကျကာ ပွောဆိုခဲ့ကွပါတယျ။
တတိယ ကမ္ဘာ စစ်ကြီး ဖြစ်ခဲ့ ရင် မြန်မာနိုင်ငံ ကို လာသိမ်း နိုင်တဲ့ နိုင်ငံ ( ၆ ) နိုင်ငံစာရင်း
ဇွန်လ (၂၃) ရက်နေ့ က မက္ကစီကို နိုင်ငံ မှာ ကြောက်မက်ဖွယ် ငလျင်ကြီး လှုပ်ခတ်သွား ခဲ့တဲ့ မြင်ကွင်း ဓာတ်ပုံများ ( ၁၃ ပုံ )